Tupu ịpụ gaa ezumike gị: Sholọ ahịa na iri nri na ọdụ ụgbọ elu Frankfurt!
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Tupu ịpụ gaa ezumike gị: Sholọ ahịa na iri nri na ọdụ ụgbọ elu Frankfurt!
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • culinary • Akụkọ Ejiji • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • Akụkọ okomoko • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Ịzụ ahịa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Ọtụtụ ụlọ ahịa na ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ amaliteghachila n'ọdụ ụgbọ elu Frankfurt - Tim Mälzer's “Pezzo di Pane” na -enye gị ezigbo ụtọ Italytali.
Enwere ọtụtụ onyinye na-adọrọ adọrọ na FRA, site na ụdị ndị German na nke mba ụwa ruo ụlọ ahịa na ụlọ nri na-ewu ewu na mpaghara.
Ụdị gụnyere Boss, Falke, Llyod, na Gant beckon nwere ego oge ọkọchị na nlele nke nchịkọta oyi ọhụrụ.
Ị ga-ahụkwa ọtụtụ nhọrọ nke ngwaahịa mara mma n'ime ụlọ ahịa Duty Free ọhụrụ nke Frankfurt Airport Retail GmbH & Co. KG mepere na mpaghara njem na-abụghị Schengen nke Pier B na Terminal 1.
Nnọọ na Airportgbọ elu Frankfurt! Ọnụ ọgụgụ na -arịwanye elu na -agụsi agụụ ike ime njem ọzọ, mpịakọta ndị njem n'ọdụ ụgbọ elu na -amụba n'ihi nke a. Ọtụtụ ụlọ ahịa na ụlọ nri na -amalitekwa ijere ha ozi, ha ga -adịkwa njikere ịnabata gị na Terminals 1 na 2 n'oge maka mmalite nke ezumike ụlọ akwụkwọ ọkọchị na steeti Hesse nke Germany na July 16.
Anke Giesen, onye isi otu Fraport AG nke na -ahụ maka azụmaahịa na ezigbo ala na -ekwu, "N'ikpeazụ, anyị nwere ike inye ndị njem anyị ohere ịzụ ahịa na ohere iri nri ọzọ." “Anyị niile ji nwayọọ nwayọọ na-alaghachi na-adịkarị ka ọrịa akpọnwụsịrị ọrịa kpatara. Anyị nwekwara ọtụtụ ihe mere anyị ga -eji jiri nchekwube na -ele anya n'ihu. ”
Enwere ọtụtụ onyinye na-adọrọ mmasị na FRA, site na ụdị ndị German na nke mba ụwa ruo ụlọ ahịa na ụlọ nri na-ewu ewu na mpaghara. Na Terminal 1, ndị njem na ndị ọbịa nwere ike ịga na "Shopping Boulevard" na "Shopping Avenue". Ụdị gụnyere Boss, Falke, Llyod, na Gant beckon nwere ego oge ọkọchị na nlele nke nchịkọta oge oyi ọhụrụ. Ị nwekwara ike ịga maka otu n'ime ụlọ ahịa asaa emepere ọnụ ahịa njem na ọrụ efu n'efu ka ịchọta mmanụ na -atọ ụtọ ma ọ bụ onyinye nye ndị ị hụrụ n'anya n'ụlọ, ma ọ bụ nke ọ bụla n'ime ngwaahịa ndị ọzọ mara mma.
Kedu maka latte macchiato dị ụtọ tupu ịpụ? Ìgwè ndị ụlọ oriri na ọ restaurantsụ 80ụ na ụlọ oriri na ọ 2ụ XNUMXụ XNUMX nwere ọ overụ nke ukwuu ijere ndị ọbịa ozi ọzọ. Ọ bụrụ na -ịchọrọ iri nri n'ime ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ, ị ga -eweta ihe akaebe na -egosi na agbaala gị ọgwụ mgbochi ma ọ bụ gbakee nke ọma ma ọ bụ nwalere nke adịghị mma n'oge na -adịbeghị anya. Agbanyeghị, nri na ihe ọ allụgesụ niile nwekwara ike nye iwu ka ewepụ ya. Food Plaza dị na elu nke Terminal XNUMX na -enye ndị ọbịa nlele dị egwu maka ihe a na -eme n'ọdụ ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ elu.